अन्तराष्ट्रिय – ईमेची डटकम
किम जोंग उनले बहिनीलाई दिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
कोरोना भाइरस र वैश्विक प्रतिबन्धले उत्तर कोरियाको अर्थव्यवस्था डामाडोल भएको छ । जसका कारण उत्तर कोरियाली तानाशाह किम जोंग उन निराश भएका छन् । त्यसैले पनि उनले अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मेवारी आफ्नी बहिनीलाई लगाएका छन् ।उनले सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुको एक सभामा देश अप्रत्याशित र अपरिहार्य चुनौतिसँग साम्ना गरिरहेको बताएका हुन् ।जसका कारण विकासको लक्ष्यमा […]
दक्षिणी अस्ट्रेलियामा जमिन उत्खनन गर्ने एक जोडीले सुनका २ डल्ला जमिनभित्र फेला पारेका छन् । यी दुई डल्लाको मूल्य अढाइ लाख अमेरिकी डलर (३ करोड नेपाली रुपैयाँ) बताइएको छ । ब्रेन्ट शेनन र एथन वेस्टले सुनका यी डल्ला भिक्टोरिया राज्यको टार्नागुल्ला शहरनजिकै जमिन खनेर भेट्टाएका हुन् । उनीहरुको यो खोजलाई चर्चित टिभ शो ‘अस्ट्रेलियन गोल्ड […]
एजेन्सी। सन् २००६ को जुन २६ मा एकै पटक चार वटा बच्चा त्यो पनि विना अप्रेसन जन्माएर चर्चामा आएकी बेलायती नागरिक सबनम सादिकले प्रकृतिमाथि ठूलो चूनौती दिएकी थिईन् । चिकित्सकहरले अप्रेसन बिना बच्चा जन्माउन नसकिने भनिरहेका बेला उनले सामान्य सिजर पछि चार वटा सन्तान एकै पटक जन्माएकी थिईन् । त्यस पछि अर्को पनि एउटा सन्तान […]
अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेकाे संख्या १५ हजार नजिक
काठमाडौँ, २७ चैत । अमेरिकामा पछिल्लो २ दिनयता कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङख्या १ हजार ९ सय हाराहारी रहेको जनाइएको छ । बुधबार मात्र अमेरिकाभरि १ हजार ९ सय २५ जनाको मृत्यु भएको वल्र्डोमिटर्सले जनाएको छ । मंगलबार १ हजार ९ सय ७० को मृत्यु भएको थियो । यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा कोरोनाका कारण […]
कोरोना रोक्न भन्दै भारतमा यस्तो अन्धविश्वास
काठमाडौं / भारतमा अन्धविश्वारले सीमा नाघेको छ । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट बच्नका लागि गौमुत्र पिउने देखि लिएर पुजापाठ गर्ने सम्मका कामहरु भइरहेका छन् । तर यो बीचमा खबर आएको छ कि कोरोना भाइरसको प्रभाव अब देवस्थानहरूमा पनि देखिन थालेको छ । भारतमा बिरामीहरूको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मन्दिरमा […]
चीनले दियो फ्रान्सलाई १० लाख मास्कसहित विभिन्‍न सामग्री
काठमाडौं -चीन सरकारले फ्रान्सलाई १० लाख मास्क दानस्वरुप पठाएको छ । युरोपभरि नै मास्कको अभाव देखिएपछि चिनियाँ अनलाइन मार्केटिङ कम्पनी अलिबाबामार्फत कार्गो विमानमार्फत चीन सरकारले मास्क फ्रान्स पठाएको बताइएको छ । कोरोना बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मास्कको अभाव देखिए पछि चीनले यस्तो सहयोग गरेको हो । रिसस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि पहिलो खण्डमा मेडिकल सामग्री पठाएको जानकारी […]
इटालीका डाक्टरको दुविधा, कसलाई उपचार गर्ने कसलाई छाड्ने?
एजेन्सी चैत ६, २०७६ | बिहीबार | काठमाडौं कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्त प्रभावित युरोपेली मुलुक इटालीमा चिकित्सकहरु नै चिन्तित बन्न थालेका छन्। विरामीहरुको उपचार गर्ने चिकित्सकहरु नै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चिन्तित बन्नुपर्ने बाध्यता आएपछि इटालीको स्थिति भयावह बन्न थालेको हो। कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका विरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु प्रत्येक दिन सयांैको संख्यामा बढेका विरामीकारण थप चिन्तामा परेका […]